Izesekeli ezi-5 EZIBALULEKILE ze-aquarium yakho | Okwezinhlanzi
Lapho uqala emhlabeni wama-aquariums udinga ukwazi ukuthi kuzofanele uthenge izesekeli ezithile zezinhlanzi zakho. Akukhona nje ukuthenga izinhlanzi, i-aquarium namanzi, kepha uzodinga uchungechunge lwe- okungeziwe ukuze yonke into isebenze kahle. Kulokhu okuthunyelwe sizokukhombisa ukuthi ziyini izesekeli ezihamba phambili ze-aquarium yakho ukuze wazi kahle okufanele uzuze.
Uma unentshisekelo yokwazi izici nokusebenza kokunye kwalokhu okungeziwe, lokhu okuthunyelwe kwakho 🙂
Amathiphu ngaphambi kokuthenga izesekeli
Ngaphambi kokujaha ukuthenga ezitolo zezinhlanzi noma zezilwane, kubalulekile ukwazi kahle ukuthi yini edingekayo. Izidingo ze-aquarium ngayinye zehlukile, yize zonke zinezinto ezifanayo. Ngokuvumelana ne izinhlobo zezinhlanzi ozozethula, ubukhulu be-aquarium, izitshalo zasemanzini, njll. Bazodinga ezinye izesekeli noma abanye.
Into yokuqala okufanele uyazi izidingo zezinhlanzi esizoba nazo e-aquarium. Akufani ukuba nezinhlanzi zasemanzini angenasawoti kunezinhlanzi zamanzi anosawoti. Futhi akufani nokuba nezinhlanzi ezishisayo kunezinye ezivela emanzini abandayo. Abanye bazodinga izitshalo zangempela kanti abanye abanamapulasitiki okuhlobisa bazokwazi ukuhlala kahle.
Okwenziwa ngabantu abaningi uma bengena kulo mhlaba ukuthenga izesekeli ezingenakubalwa. Konke lokhu ukwandisa ubuhle. Kodwa-ke, eziningi zazo azidingeki futhi ekugcineni zizonciphisa indawo yokubhukuda kwezinhlanzi, isikhathi sethu kanye nemali.
Okukhethwa kukho okuhle kakhulu uma kukhulunywa ngokuba nezesekeli ukuthi i-aquarium ihlale ihlanzekile futhi ihlanzekile. Ngaphandle kwalokho, noma ngabe sinayo, kuzovela ukuthi ayinakekelwa kahle.
Izesekeli ezihamba phambili ze-aquarium
Ngokulandelayo sizobhala uhlu lwezesekeli oludingwa yi-aquarium futhi ezokusiza ukunakekela izinhlanzi. Zonke ezinye izesekeli zihlobisa nje futhi azihlinzeki nganoma yini ewusizo.
I-ICA OP200 Optimius 200 -…
Isihlungi se-NICREW se ...
ICA OP600 Hlunga Yangaphakathi ...
Ayikho imikhiqizo etholakele.zibalulekile e-aquarium. Kudingeka okungenani kube munye. Ngale ndlela siqinisekisa ukuthi kunezimo ezidingekayo ukuze izinhlanzi zihlale ziphila. Izihlungi Banomsebenzi wokuhlanza amanzi ezinsalela ezakhiwe futhi lokho kuhlala kuntanta.
Kubalulekile ukuthi amanzi asethangini lezinhlanzi agcinwe ehlanzekile ukuze izinhlanzi zibe nempilo. Futhi kusebenza ukufeza ukuhlunga kwezinto eziphilayo. Lokhu kusho ukuthi udoti uguqulwa ube amabhaktheriya alusizo enhlanzini.
Kunezinhlobo eziningi zezihlungi, kepha ngokuvamile lezo ezine- ukuhlunga okungokwemvelo, kwemishini nokwamakhemikhali. Ngalolu hlobo lokuhlunga kwanele ukugcina i-aquarium isesimweni esihle.
Enye indlela ehlukile ukuthenga izihlungi ngokwehlukana. Le nketho ibiza kakhulu futhi idinga ukugcinwa okuningi. Kodwa-ke, kusinikeza inkululeko ethe xaxa ekukhetheni esicabanga ukuthi kuyadingeka futhi singabuyisela iyunithi eyodwa uma ingayeka ukusebenza.
I-BPS Aquarium Heater ...
I-BPS Submersible Heater...
RBSD Calentador de…
Izinhlanzi eziningi zidinga amanzi afudumele ukulingisa izimo zemvelo zendawo yazo eshisayo. Lezi izesekeli ezibalulekile uma sifuna izinhlanzi ziphile kahle. Kunezinhlobo eziningi zama-heater. Okunconywe kakhulu yilabo abane- umthethonqubo wokushisa othomathikhi. Ngale ndlela ungakhetha izinga lokushisa elifanele izinhlanzi elidinga ukuba kulo futhi uligcine.
Isici okufanele sinakwe lapho Ayikho imikhiqizo etholakele.ukubona ukuthi ingasebenza ngenani lamanzi i-aquarium yethu enayo. Kuhlale kuyindlela enhle ukuthenga eyodwa enkulu ukuze ingashodi nokuthi ayishisi wonke amanzi.
Ukukhanya kwe-LED kwe-LED ...
I-NICREW White Light LED ...
I-BPS White / Blue LED Light ...
Ukukhanyisa kusetshenziselwa ukulingisa ukukhanya kwelanga futhi kunikeza nokubukeka kobuhle obufezekile nobuhle. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamalambu okukhanyisa. Kusukela kumashubhu we-fluorescent kuya kweminye enemibala ehlukene, imichilo eholelekile nezibani zamalambu.
Ukukhanyisa akulandeli iphethini eqinile, ngoba kuyindaba yokunambitheka. Ukunquma ukukhanya okudingekayo kunephethini ekhombisa ukuthi kufanele isetshenziswe cishe amalambu angama-30 ngelitha ngalinye lamanzi.
Esinye isici esibalulekile ekukhanyeni umbala nokuqina. Uma sinezitshalo zemvelo zasemanzini, sizodinga ukukhanyisa okusinika ukukhanya kwemvelo. Amandla aphakeme awafani nelanga, ngakho-ke awasetshenziswa kakhulu. Ukuphakama kokukhanya kokukhanya, izitshalo zizokhula kakhulu. Ngokuphambene nalokho, bazokhula bade.
Umbhede we-Oxygenator Aquarium, ...
I-NICREW Classic Air Pump ...
I-NICREW Nano Silent Mini ...
Lezi izesekeli ezibekwe ku-aquarium ezisebenzela ukukhulisa umoya wamanzi futhi, ngawo, ukwandisa isikhathi sokuphila sezinhlanzi nezitshalo. Izinhlanzi nezitshalo zasemanzini zidinga izinga lomoya oncibilikisiwe emanzini ukuze ziphile. Ngoguquko lwamanzi, ukuhlunga kanye nezitshalo kungenzeka ukuthi kungene amanzi umoya-mpilo. Kepha kunezikhathi lapho kunganele futhi ngiyazi badinga ama-aerator.
Ukusebenza kwayo kulula. Badonsa umoya ungene e-aquarium ngendlela yokuthi kukhiqizwa amabhamuza nokunyakaza kwamanzi.
Okubi ngalawa madivayisi ukuthi adinga ukulinganiswa okuqinile ukuze asebenze kahle. Umoya okumele uxoshwe kufanele ugweme ukuphazanyiswa izinhlanzi noma uphakamise izinsalela ezingcolisa amanzi.
Banikeza ithangi lezinhlanzi ukubukeka kokuhlobisa futhi bakhe indawo ejabulisa iso, kwakheke indawo enobuhle obengeziwe.
Ukuhlolwa kwezinga lenkomba yamanzi
Isibonisi Sedijithali Esiphathwayo ...
Imitha Yokuhlola Ingcindezi
Medidor De Ph Digital…
Izikhathi eziningi izinhlanzi ziyafa futhi akwaziwa ukuthi kungani. Noma ngabe unazo zonke izesekeli ezingenhla, kufanele wazi isimo samanzi. Kulokhu kukhona ukuhlolwa kwamanzi.
Amapharamitha wamanzi afana ne-pH value (pH), ukuqina okuphelele (GH), ukuqina kwe-carbonate (KH), i-ammonium / ammonia (NH4 / NH3), i-nitrite (NO2), i-nitrate (NO3), i-phosphate (PO4) ne-iron (Fe) .
Ngalawa mamitha singazi isimo samanzi futhi sazi ukuthi anele yini.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zesekeli ungaba ne-aquarium yakho isesimweni esihle.
Ukucaciswa kwamanzi e-Aquarium
Por Natalia Cherry kwenza Izinyanga ze-9 .
Ukucaciswa kwamanzi e-aquarium kuwusizo olukhulu ekugcineni amanzi ahlanzekile futhi ngaphandle kwalowo muzwa we ...
Ukuhlolwa kwe-Aquarium akunconywa kuphela, kepha kungabhekwa njengokuphoqelekile ukugcina ikhwalithi yamanzi ...
Por Natalia Cherry kwenza Izinyanga ze-10 .
I-CO2 yama-aquariums yisihloko esinemvuthu eminingi futhi inconyelwe kuphela ama-aquarists adinga kakhulu, ngoba ...
Kukhona amathani emihlobiso enemibono emihle kakhulu yokuhlobisa i-aquarium, kusuka emadwaleni noma ezindongeni kuya ezibalweni zakudala ...
Izihlungi zobhaka ziyisinqumo esihle se-aquarium, enkulu noma encane, futhi akunandaba ukuthi ...
Izihlungi ze-AquaClear zizwakala njenganoma ngubani oke waba semhlabeni we-aquarium isikhashana, ngoba ...
Amakhithi we-aquarium aphelele afanele ukuqala ngawo, okungukuthi, kubalandeli bomhlaba wezinhlanzi futhi ...
Sesishilo kaningi ukuthi okunzima kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu, ngaleso sikhathi ...
Isilungisi samanzi se-Aquarium
Isilondolozi samanzi siyinto edingeka kakhulu ukuhlanza amanzi avela ngqo empompini bese uwaguqula aba ...
Por Natalia Cherry kwenza Izinyanga ze-11 .
I-aquarium siphoner ingelinye lamathuluzi ayisisekelo wokukwazi ukwenza ukugcinwa kwe-aquarium yethu kanye ...
I-thermometer ye-aquarium iyithuluzi eliyisisekelo elisiza ukugcina amazinga okushisa e-aquarium alawulwe ngokuphelele. A) Yebo…
Skimmer ye-aquarium yakho
I-Amazon biotope yezinhlobo ezincane